UNtini uzibona ezokhula kakhulu kwiDolphins - Impempe UNtini uzibona ezokhula kakhulu kwiDolphins
UNtini uzibona ezokhula kakhulu kwiDolphins
June 8, 2021 June 8, 2021 Impempe.com
Umshwibi osemncane weHollywoodbets Dolphins, uThando Ntini uhlabeke umxhwele yindlela izinto ezenzeka ngayo kuleli qembu. Lo mdlali obukeka enekusasa eliqhakazile, uthi waqoma leli qembu ngoba linesiko lokuwina.
Uthi nesimo sezulu saseThekwini sijwayelile kuyena njengoba ezalwa edolobheni eligudle ulwandle, i-East London. Utshele Impempe ukuthi bekunzima kakhulu ngesikhathi eseqenjini leHighveld Lions ngoba kusogwadule.
“Ukujwayela isimo sakhona kube nzinyana, akufani nalapha Ethekwini. Ngiyacabanga ukuthi lokhu kuzongisiza ngenyuse izinga lami kakhulu. Inhloso njengamanje wukulwela ukungena esikimini, uma sekwenzekile lokho ngizobe sengilwela ukuhlala khona,” kusho le nsizwa eneminyaka engu-20.
Uthui ukusebenza nethimba labaqeqeshi eliholwa ngu-Imraan Khan ukholwa wukuthi kuzomsiza kakhulu. Akasafuni ukwaziwa njengoshwibi nje kuphela kodwa ufuna ukukhula nakwezinye izinto njengokubhetha.
“Kuningi kakhulu engikufunda kulaba baqeqeshi. Ngizoqhubeka ngincele lonke ulwazi engingaluthola kubo ukuze ngikhule kulo mdlalo. Bazinikele emsebenzini wabo ngakho kulula ukuthola ulwazi kubo,” kusho yena.
Phambilini umfokaNtini udlale imdlalo eminingi eqenjini lesizwe labafana abaneminyaka engaphansi kuka-19. Uthe ikhono lakhe lokushwiba lizoqina kakhulu njengoba esecijwa nguQuinton De Kok.
UDe Kok wayengumshwibi ogqamile ngezikhathi zakhe kumaProteas. “Yize ngiqala ukusebenza naye njengoba sizilungiselela ukuqala kwesizini, sekukuningi engikubonile ukuthi uzongisiza kukho,” kuphetha uNtini.
IkhilikithiThando Ntini Dolphins Lions
Previous Previous post: Usebheke ukuyodlala phesheya uZoleka okhulele kunobhutshuzwayo
Next Next post: Uthweswe iziqu umsakazi wodumo lwe “Laduuuma!”